“နှင်းတွေထဲထည့်ပေးလိုက်ရတဲ့ နှင်းမှုန်အိပ်မက်တွေ” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Short Story » “နှင်းတွေထဲထည့်ပေးလိုက်ရတဲ့ နှင်းမှုန်အိပ်မက်တွေ”
Posted by သူရဿဝါ on Jun 21, 2011 in Short Story | 1 comment
နှင်းဖြူ မြူခိုးတွေ ဖွဲဖွဲဝေေ၀ ကြွေတဲ့ ကာလ။ လွမ်းမောစရာ ကောင်းတဲ့ မနက်ခင်း တစ်ခု မှာပဲ ကောင်လေးဟာ သူ့အတွက် “နှင်းမှုန်အိပ်မက်လေး” လို့ နောင်တစ်ချိန် နာမည် ပေးထား မိမယ့် နှင်းဖြူ နတ်သမီး လေးကို ၀ိုးဝိုးဝါးဝါး နှင်းပြောက်တွေ ကြားမှာ စတွေ့ ခဲ့တယ်။ မြင်မြင်ရာ မှုန်မှိုင်း စိုစွတ်ပြီး ချမ်းစိမ့်စိမ့် တိုက်ခတ်တဲ့ ဟူးဟူးရားရား လေညင်းတွေ ကြားမှာ ကောင်မလေးဟာ နှင်းမှုန် တွေနဲ့ အပြိုင် ပျိုပျိုရှားရှားလေး သိပ်ကို လှပ နေခဲ့တယ်။ အလင်း မပွင့် သေးတဲ့ ဆောင်းနံနက်ခင်းရယ်၊ ကောင်မလေးရယ်၊ သူ့ကိုယ်ပေါ်က အားကစား ထရက်စု ၀တ်စုံလေး ရယ်ဟာ ကောင်လေး အတွက်တော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ တွယ်ဆက် ပနံရမှု တစ်ခု ဖြစ်နေ ခဲ့ပါတယ်။
ချစ်တဲ့ ဆောင်းပျိုမ လေးရဲ့အလှကို မြင်နေ ရရုံနဲ့ ရောင့်ရဲ နေတတ်တဲ့ ကောင်လေးဟာ ကောင်မလေး ထိုင်ပြီး အနားယူ နေကျ ခုံတန်းလေး နားမှာ မနက်တိုင်း စောင့်ရှောက် ကြည့်ငေး နေဖို့က လွဲပြီး တခြား ဘာကိုမှ မကြိုးစား ခဲ့ပါဘူး။ ကောင်မလေးရဲ့ အိမ်နေရာကို မသိဘူး၊ ဖုန်းနံပါတ်ကို မသိဘူး၊ နာမည် ကိုတောင် မသိခဲ့တဲ့ ကောင်လေးဟာ သူ့ရဲ့ ကြမ်းရှရှ ကဗျာစာအုပ် လေးထဲ မှာတော့ ပါဒတွေ၊ ကာရန်တွေ၊ စကားလုံးတွေ အများကြီး သုံးပြီး သူ့ချစ်သူ လေးကို ချင်းချင်း နင်းနင်း လိုက်ရှာ နေခဲ့ ပါတယ်။ ကောင်လေးဟာ ကောင်မလေးကို သိပ်ချစ် နေခဲ့ ပါပြီ။
ပိုမို အေးစိမ့် လာတဲ့ မနက်ခင်း တွေကို သယ်ဆောင်ပြီး ဆောင်းရာသီဟာ သူ့သရုပ်ကို ပီပြင် လာစေ သလိုပဲ ကောင်မလေး အတွက်လည်း ထူးဆန်းတဲ့၊ အမျိုးအမည် မသိတဲ့ အဖြစ် လေးတွေ ကြုံတွေ့ လာခဲ့ရ ပါတယ်။ ထိုင်ပြီး အနားယူ နေကျ နေရာ လေးကို ရောက်လာ တာနဲ့ ခုံတန်းလေး ပေါ်မှာ တင်ထား တတ်တဲ့ လက်ရေး စောင်းစောင်း လေးတွေ ပါတဲ့ စာရွက်လေး တွေကို မနက်တိုင်း မပျက်မကွက် မြင်လာ ရပါတယ်။ အဲဒီ လက်ရေး စောင်းစောင်း ကဗျာတိုလေး တွေဟာလည်း ကောင်မလေးရဲ့ မနက်ခင်းတိုင်း အတွက် အဖော်သဟဲ တစ်ခု ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာ ခဲ့ပါတယ်။ ခုံတန်း လေးနား မရောက်ခင် အဝေးက နေပြီးတော့ ကဗျာ စာရွက်လေး ရောက်နေပြီ လားလို့ မျှော်ရည်တမ်းတ တတ်လာ ပါတယ်။ ဆောင်းနံနက်ခင်းရဲ့ ကဗျာတို လေးတွေဟာ ကောင်မလေး အတွက်တော့ မီးလင်းဖိုလေး တစ်ခုလို နွေးထွေး စေခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီ လက်ရေး စောင်းစောင်း ပိုင်ရှင်ကို ဟိုဟိုဒီဒီ လိုက်ရှာ ကြည့်မိ တိုင်းလည်း ပန်းခြံ ထောင့်မှာ အလုပ် တစ်ခုခုကို အာရုံစိုက်ပြီး လုပ်နေ တတ်တဲ့ ပန်းခြံစောင့် လူငယ်လေး ကလွဲပြီး တခြား မတွေ့ခဲ့ ပါဘူး။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နေသား ကျလာတဲ့ နောက်မှာ ကောင်မလေး ဟာလည်း ကဗျာစာရွက် လေးတွေ ကိုသာ သိမ်းဆည်း ထားလိုက်ပြီး ပိုင်ရှင်ကို မရှာ တော့ပါဘူး။
အဲဒီလို ခေါင်းစဉ်တပ် မထားတဲ့ ကဗျာတို လေးတွေကို ငုံ့ပြီး ဖတ်နေ တတ်တဲ့ ချစ်သော မိန်းမပျို လေးကို ကောင်လေး ကတော့ ခိုးခိုး ကြည့်နေမြဲ ပါပဲ။ ပန်းပွင့်မယ်လေး …. နတ်သမီး လေးရယ် ….. ရင်ထဲ မှာတော့ ခပ်ဖွဖွ ရွတ်ဆို နေခဲ့မိ ပါရဲ့။ ဒီကဗျာ တွေရဲ့ ပိုင်ရှင်ဟာ “ဘယ်လို ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု မျိုးကိုမှ မပိုင်တဲ့ ခပ်နွမ်းနွမ်း ပန်းခြံစောင့်လေး တစ်ယောက် မှန်းသာ သိသွား ခဲ့ရင်” ဆိုတဲ့ အတွေးက ကောင်လေး အပေါ် အုပ်မိုး ထားတဲ့ အရိပ်၊ ကောင်လေးကို ခြောက်လှန့်တဲ့ တစ္ဆေ ပါပဲ။ အငုံ့စိတ် တွေနဲ့ ခေါင်းငုံ့ နေခဲ့ ရတဲ့ ကောင်လေးဟာ သူ့ကဗျာလေး တွေအပေါ် သစ္စာ စောင့်သိ ထားခဲ့ ပါတယ်။ အဲဒီ ကဗျာ လေးတွေ အပေါ် ကောင်မလေး ထားတဲ့ တန်ဖိုး နေရာ … ကောင်မလေး မျက်ဝန်း တွေထဲက ကြည်ကြည် မွေ့မွေ့ ကဗျာ ….. အဲဒါတွေ အတွက် မသေချာ လှတဲ့ သူ့နေရာကို ၀င်မယူဘဲ ဖျောက်ဖျက် နေခဲ့ ပါတယ်။
ကုမုဒြာ ကြာဟာ သူ့ရဲ့ ဖူးငုံ ပွင့်အာခွင့် အတွက် လရောင် မြမြကို လှမ်းပြီး ခွင့်တောင်း စရာ မလိုတဲ့ နားလည်မှု တစ်မျိုး လိုပါပဲ။ ကောင်မလေး အတွက်တော့ ကဗျာတို လေးတွေရယ်၊ ဘယ်တုန်း ကမှ မမြင်ဖူး ခဲ့တဲ့ လက်ရေး စောင်းစောင်း ပိုင်ရှင် ကောင်လေး ရယ်ဟာ သူမရဲ့ နားလည်မှု တွေထဲမှာ ချစ်သူ အဖြစ် တည်ရှိ နေခဲ့ ပါပြီ။ ချစ်သူတွေ အတွက် နှလုံးသားမှာ ပေါ်ပေါက်တဲ့ နားလည် ခံစားမှု ကလွဲရင် ဘာမှလည်း မလိုအပ် ပါဘူးကွယ်။ ကောင်မလေး သိနေခဲ့ ပါတယ်။ ကောင်လေးဟာ သူ့ကို တစ်နေရာရာ ကနေ ကြည်နူး မြူးရီတဲ့ မျက်လုံး အစုံနဲ့ ကြည့်နေ လိမ့်မယ်။ ဘယ်တော့မှ ရိုးအီ ပြီးဆုံး မသွား နိုင်တဲ့ ချစ်စကား တွေကိုလည်း ခွန်းချီသီသီ ပြောနေရှာ လိမ့်မယ်။ ကောင်လေးရဲ့ ကဗျာတွေ အကြောင်းကို ကောင်မလေး အသိဆုံး ဖြစ်နေခဲ့ ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ နာရီတွေ လည်နေခဲ့ ….။ ရာသီ တွေလည်း လည်လာ ခဲ့ပါတယ်။ နွေက သူ့ရဲ့ ရနံ့ကို ကမ္ဘာ လောကဆီ ပို့လွှတ်စ ပြုနေပြီ။ ကျေးငှက်သံ တကျီကျီ ကိုလည်း အရင် ကထက် ပိုပြီး ကြားလာ ရပြီ။ ကောင်လေးရဲ့ ကဗျာတွေ ကလည်း နွေရဲ့ ဒဏ်ကြောင့် တဖြည်းဖြည်း နွမ်းရိ ကြေကွဲ သံတွေ ပါလာ သလို ပါပဲ။ ရှေ့ဆက် ရင်ဆိုင် ရမယ့် ရက်တွေ အတွက် ကြိုပြီး ကြေကွဲ နေခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်။ အဲဒီနှစ် ဆောင်းတွင်းရဲ့ နောက်ဆုံးသော မနက်ခင်း မှာပဲ ကောင်မလေး ဟာလည်း နောက်ဆုံးရက် အနေနဲ့ ခုံတန်း လေးဆီ ရောက်လာ ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူမ မျှော်လင့်ထား သလိုမျိုး ကောင်လေးရဲ့ ကဗျာ စာရွက်လေး ကိုတော့ နောက်ဆုံး လက်ဆောင် အဖြစ် မတွေ့ရ တော့ပါဘူး။ နွေဟာ နွေပါပဲ လားကွယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ ရင်အစုံဟာ မီးပူရှားခဲ အဟပ်ခံရ သလိုမျိုး ချက်ခြင်းပဲ ပူလောင်ကွဲရှ လာခဲ့ ပါတယ်။ ခါတိုင်း လိုပဲ ပန်းခြံ ထောင့်မှာ အလုပ်လုပ် နေတဲ့ ပန်းခြံစောင့် လူငယ် လေးကို မေးကြည့်ဖို့ စိတ်ကူး ပြီးမှ လက်လျှော့ လိုက်တယ်။ မထူးလှ တော့ပါ ဘူးကွယ်။
အားလျှော့ ညှိုးချုန်း စိတ်နဲ့ ကောင်မလေး ပြန်လာ ခဲ့တယ်။ ဒီနေ့ ပူလောင် လွန်းလှ ချည်ရဲ့ လို့လည်း အထပ်ထပ် မြည်တမ်း နေမိ ပြန်တယ်။ သူမကသာ ပြန်နေ ပေမယ့် စိတ်အစဉ် ကတော့ ခုံတန်းလေး နားကနေ တစ်ဖ၀ါးမှ ခွာနိုင် သေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဖျတ်ခနဲ အသိတစ်ချက် အပွင့်မှာ ကောင်မလေး ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု ချလိုက်တယ်။ ရှေ့ကို သွားနေတိုင်း မရောက် နိုင်တဲ့ ခရီးတွေ အကြောင်းကို သဘောပေါက် သွားသွား ချင်းပဲ ခုံတန်းလေး ဆီကို ပြန်လှည့် လာမိတယ်။ ခုံတန်း လေးနား အရောက် မှာတော့ ကောင်မလေး အရမ်းကို အံ့သြ ရပါပြီ။ ချစ်ကြသူ တိုင်းမှာ စိတ်အာရုံ တစ်လှိုင်းတည်း တူညီ နေကြတယ် ဆိုတာ ကိုလည်း ယုံကြည် လာတယ်။ ခုံတန်း ပေါ်မှာက သူမ အတွက် တန်ဖိုး မဖြတ်နိုင် လောက်တဲ့ ကဗျာ စာရွက်လေး ………
တကယ့်ကို ကြေကွဲစရာ ကောင်းတဲ့ နှုတ်ဆက် ကဗျာကို ဖတ်နေ ခဲ့တာ တောင်မှ ကောင်မလေးဟာ ၀မ်းသာ ကြည်နူး နေခဲ့ ပါတယ်။ ကောင်လေးဟာ သူမရဲ့ စိတ်အစဉ်ကို ဘာကြောင့်များ ဒီလောက်ထိ ဖတ်ရှု ကြည့်မြင် တတ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ မသိနိုင် ပါဘူး။ ဒီကဗျာ လေးဟာ …. ပြီးတော့ အရင်က သိမ်းထား ခဲ့တဲ့ ကဗျာလေး တွေဟာ နောင်နှစ် ဆောင်းဦးပေါက် ရက်တွေကို စောင့်ကြို ငံ့လင့် နေရှာမယ့် ကောင်မလေး အတွက် ခွန်အား ဖြစ်စေခဲ့ ပါတယ်။ လာမယ့် ဆောင်းဦးပေါက် ရက်တွေဆီ သွားဖို့ နေပူပူ နွေတွေ …. စွတ်စို ထိုင်းမှိုင်းတဲ့ မိုးစက် တွေကို ကောင်မလေးဟာ ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်း စတင် ဖြတ်သန်း လာပါ တော့တယ်။
ကောင်လေး အတွက် ကတော့ နွေနေ့ တွေဟာ သူ့ကျောပြင် ပေါ်ကို ပူလောင်စွာ စီးကျခြင်း နဲ့ပဲ စတင် ထိတွေ့ လာကြ ပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဆောင်းမနက်ခင်း နေ့က သူ့ရဲ့ နှင်းဖြူမလေးကို လွမ်းတဲ့ အလွမ်း တွေကိုပဲ လာမယ့် ဆောင်းဦးရက် တွေဆီ သယ်ပိုး ခေါ်ဆောင် သွားရ တော့မယ်။ တောင်းပန် ပါတယ် နွေရယ်။ ငါ့နှလုံးသား ကလွဲရင် ငါ့ကျောပြင်ပေါ် ….. ငါ့ဦးခေါင်းပေါ် …. အို … ကြိုက်တဲ့ နေရာကို ပူလောင် စေလို့ ရပါတယ်။ ကောင်လေးဟာ အဲဒီလိုပဲ ဆုတောင်း နေတတ် ခဲ့ပါတယ်။ ကောင်မလေးရဲ့ နေရာကို မသိခဲ့တဲ့ အတွက် တစ်ခါ တစ်ရံ ခပ်ပါးပါးလေး နောင်တ ရနေ တတ်တာ ကလွဲပြီး နွေရက် တွေကို ကောင်လေး သတိရ စိတ်နဲ့ဘဲ ဖြတ်ကျော် လာခဲ့ ပါတယ်။
သူမရဲ့ မျက်နှာ ကလေး …. သူမရဲ့ ခြေဖမိုးလေး …. သူမရဲ့ အမောဖြေဟန် လေးတွေက အချိန် တော်တော် များများကို ခြူဆွတ် ယူနေ ခဲ့သလို ပါပဲ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နွေရဲ့ ပူလောင် အက်ကွဲ မှုတွေ လျော့ပါး လာပြီး ကောင်လေးရဲ့ မျက်နှာပေါ် မိုးစက် လေးတွေ ညင်ညင်သာသာ ထိခတ် လာကြ ပြန်ပါ တော့တယ်။ မိုးရဲ့ ရနံ့ကို သယ်ဆောင် လာတဲ့ မြောက်ပြန် လေတွေ …. တစ်စက်စက် ကျလာ တတ်တဲ့ မိုးစက် တွေဟာ ကောင်လေး အတွက်တော့ အထိမ်း အမှတ် တစ်ခုခုကို သယ်ဆောင် နေတာ ပါပဲ။ နွေရဲ့ အပူကို ခါးဆီး ရင်ဆီး ခံရင်း မိုးရာသီ ရောက်တဲ့ အထိ သူ့အလွမ်း တွေကိုပါ တခုတ်တရ သယ်ဆောင် လာခဲ့တယ်။ အရင် ကထက် ပိုပြီး သစ်ပင် ပန်းမာလ်တွေ စိမ်းစို လန်းဆန်း လာကြတယ်။ ထီးရောင်စုံတွေ အောက်က လူရောင်စုံတွေ …. စိုစွတ်စွတ် လမ်းမ ပေါ်က ကားရောင်စုံတွေ … ပြီးတော့ တက်ကြွလန်းဆတ် နေတဲ့ အဖြူအစိမ်း ကျောင်းဝတ်စုံ လေးတွေ …. သာယာ နာပျော် စရာ ခေါင်းလောင်း သံတွေ ကြားမှာ ကောင်လေးဟာ နည်းနည်းတော့ သက်ဝင် လှုပ်ရှား မှုတွေ ပြန်ရ လာခဲ့ သလို ပါပဲ။ မိုးစက်တွေ အောက်မှာ ထိုင်ရင်း ဆောင်းကို မျှော်နေ ခဲ့တယ်။
တစုံတရာ ကိုပဲ မျှော်လင့်ရင်း … စောင့်စားရင်း … တွေးနေ တတ်သူ အတွက် အဲဒီ မျှော်လင့် ခြင်းဟာ တဖြည်းဖြည်း လင်းလာ ခဲ့ပါတယ်။ ကောင်လေးဟာ သူ့ရဲ့ အချစ်ကို သူဖြတ်သန်း ခဲ့တဲ့ ရာသီ တွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး စဉ်းစား မိတယ်။ ဆောင်းကို ရောက်ဖို့ နွေဦးကို သူဖြတ်သန်းတယ်။ နွေလယ်၊ နွေနှောင်း … သူဖြတ်သန်း လာခဲ့တယ်။ နွေကုန်တော့ မိုးနဲ့ ထိတွေ့ရ ပြန်တယ်။ ဒီလိုပဲ မိုးစက်တွေ အောက်က သူ့ရဲ့ စိုစွတ်ခြင်း ကိုပဲ ကြိုးစား ဖြတ်သန်း ပြီးတဲ့အခါ သူမျှော်လင့်တဲ့ ဆောင်းကို မလွဲမသွေ ရောက်လိမ့် ဦးမယ်။ အဲဒီလို ပါပဲ။ ကောင်မလေးကို သူချစ် နေခဲ့တဲ့ အကြောင်း ကောင်မလေး သိလာအောင် … လက်ခံ လာအောင် …. နောက်ဆုံး အဲဒီ အချစ်နဲ့ ညီမျှတဲ့ ရလဒ် တစ်ခုခု တုံ့ပြန် လာအောင် သူကြိုးစား ဖြတ်သန်း သွားသင့် တယ်လို့ ကောင်လေး တွေးမိ လာတယ်။ ကောင်လေး ဆုံးဖြတ် လိုက်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ဆောင်းတွင်း နတ်သမီး လေးကို သူဖွင့်ပြော တော့မယ်။
အနာဂတ်မှာ ပွင့်မယ့် ပန်းအတွက် ပစ္စုပန် ကတည်းက ရနံ့တွေ လှိုင်နေ ခဲ့ပါတယ်။ “အဲဒီအချိန်ကျရင်” ဆိုတာကို ကြိုတွေးရင်း ကုန်ခဲ လှတဲ့ မိုးစက် မိုးပေါက်တွေ ကြားထဲမှာ သူ့မျှော်လင့်ချက် တွေကို စိုစွတ်ယိမ်းပျို နေစေ ခဲ့တယ်။ နင့်နင့်ပိုးပိုး ထမ်းထားရ ပေမယ့်လည်း အဲဒီ မျှော်လင့်ချက် တွေက ကောင်လေးကို မလေးပင် စေခဲ့ ပါဘူး။
မမြန်ဆန်လှ ပေမယ့်လည်း ဆောင်းရဲ့ ရနံ့ ကတော့ အသစ် တဖန် သင်းပျံ့ လာခဲ့ ပြန်တယ်။ နှင်းပြောက် မြူမှုန်တွေ ပြန်ပြီး ဖြူလွ လာခဲ့တယ်။ မနက်ခင်း စောစော ပန်းရုံ လေးတွေ ပေါ်မှာ … မြက်ပင် ထိပ်ဖျား လေးတွေ ပေါ်မှာ ….. နှင်းစက်နှင်းသီး လေးတွေ တွဲခိုစုရုန်း လာကြတယ်။ “ငါ့အိပ်မက် တွေကို ငါ့သွေးခုန် နှုန်းနဲ့ တဂျုံးဂျုံး ခုတ်မောင်း နိုင်တော့မယ်” လို့ တွေးရင်း ကောင်လေး ပျော်နေခဲ့ ပါတယ်။
နှင်းနတ်သမီးကို ကိုးကွယ်ခြင်း ဆိုပြီး
အတန်အသင့် ချမ်းခိုက် မှုန်ဝေတဲ့ ဆောင်းနံနက်ခင်း တစ်ခုမှာ အဲဒီ ကဗျာလေးကို ယူပြီး ခုံတန်း လေးပေါ် တင်ထား ခဲ့ဖို့ ကောင်လေး ရောက်လာ ခဲ့တယ်။ ဟိုအရင် ကလိုပဲ ခုံတန်းလေး နားကို ရင်ခုန်သံ တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ ချဉ်းကပ်ပြီး ကဗျာ စာရွက်လေး တင်ထား ခဲ့ဖို့ ကြည့်လိုက်တယ်။ အိုး ….. ကောင်လေး အံ့သြ သွားပါတယ်။ ခုံတန်း ပေါ်မှာ သူ့ထက် အရင် ရောက်နေတဲ့ စာရွက်လေး တစ်ရွက်။ ဝေခွဲ မရခြင်း နဲ့အတူ စာရွက် လေးကို ကောင်လေး ကောက်ယူ ကြည့်လိုက် မိတယ်။
၀ိုင်းစက် လှပတဲ့ စာလုံးတွေ တိုင်းဟာ ကောင်လေး အတွက်တော့ ပူလောင် တောက်ရှတဲ့ မျက်ရည်စတွေ ဖြစ်လာ ခဲ့ပါပြီ။ နှင်းဖြူ နတ်သမီး လေးရယ် …. ချစ်ရသူ လေးရယ် မင်းလည်း ငိုနေ ခဲ့တယ် မဟုတ် လားကွယ်။ ထူးခြားတဲ့ စေ့ဆော်မှု တစ်မျိုး နဲ့ပဲ ကောင်လေး သိလိုက် ရတယ်။ ကောင်မလေးလည်း သူ့ကို ချစ်နေ ခဲ့တာ ပါလား။ ကျန်ရစ် ခဲ့မယ့် ဆောင်းမနက်ခင်း တွေကို ကျန်ရစ် ခဲ့ရမှာခြင်း တူတဲ့ ကိုယ်ကရော ဘယ်လို နာသာ ခံခက်မှု မျိုးနဲ့ နှစ်သိမ့်လို့ ရနိုင်ပါ့မလဲ။ ဒါဟာ …. နွေနဲ့ မိုးကို ခက်ခဲကြမ်းရှမှု အပြည့်နဲ့ ဖြတ်လာ ခဲ့ရတဲ့ ကိုယ့်အတွက် ….. ကိုယ်မျှော်တဲ့ ဆောင်းတဲ့လား။ အစိတ်စိတ် ကွဲကြေ သွားတဲ့ ပန်းအိုးလေး တစ်လုံး လိုပဲ ကောင်လေးဟာ သူ့ရဲ့ စိတ်ဝိဥာဉ်ကို သူ့ကိုယ်နဲ့ ပြန်မဆက် တတ်တော့ဘူး။ မနက်ဖြန် မနက်ရဲ့ နှင်းပျောက် နှင်းစက်တွေ အောက်မှာ ….. ကိုယ့်ရဲ့ ကဗျာတို လေးတွေကို ကောက်ယူ မယ့်သူ မရှိ တော့တဲ့ ခုံတန်းလေး အနား ……။ မနက်ဖြန် အကြောင်းတောင် ကောင်းကောင်း မတွေးတတ် ခဲ့သူ အတွက် ရှေ့ဆက် ရမယ့် ရက်တွေက ကန္တာရဆူး တွေလိုပဲ ကြမ်းခက်ရင့်အို နေကြ တော့မှာ ပေါ့ကွယ်။ မနက်ဖြန် နံနက်ရဲ့ ခုံတန်းလေး အနား ….. ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း ….. ကိုယ်မနေဘူး။ မနက်ဖြန် မနက် အာရုံ တက်မှာ ကိုယ်ဘူတာရုံ လေးထဲ အရောက် လာပြီး မင်းကို နှုတ်ဆက် ရမယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နှုတ်ဆက် ကြချိန်ဟာ ပူလောင် လွန်းရမယ် ဆိုတာ သိပေမယ့် တစ်သက်စာ သိမ်းထား ရတော့မယ့် မျက်နှာထား လေးနဲ့ အလဲအထပ် လုပ်ယူမယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် မင်းရှိ နေမယ့် ၀န်းကျင်မှာ ကိုယ်လည်း ရှိနေ ရမယ်။ အဆုံးစွန် ….. ကြွေလွင့် ပါစေ တော့ကွယ်။
နံနက်ခင်း …. နှင်းတွေ ဝေသီ ဖြူဝါး နေတဲ့ အဲဒီ မနက်ခင်းမှာ သူတို့ မြို့လေး ထဲက တစ်ခု တည်းသော ဘူတာရုံ လေးထဲမှာ ကောင်လေး ရောက်နေ ခဲ့တယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ ချမ်းခိုက် သုန်မှုန် နေပါစေ …. ရင်ထဲမှာ မီးတွေ မြိုချ ထားခဲ့ ရတဲ့ ကောင်လေး ကိုတော့ နှင်းတွေဟာ မအေးချမ်း စေနိုင် ခဲ့ပါဘူး။ ဘူတာရုံ ထောင့်က ခုံလေး ပေါ်မှာ ထိုင်ရင်း ကဗျာတိုလေး တစ်ပုဒ်ကို ရွတ်ဆို မိမှန်း မသိ ရွတ်ဆို နေခဲ့တယ်။
မြင်နေ ရတယ်။ မြင်နေ ခဲ့ရတယ်။ ဘူတာရုံ ထောင့်မှာ ထိုင်နေတဲ့ ကောင်လေးကို ဒီမနက်ခင်း မှာမှ မဟုတ်ဘူး။ ကောင်မလေး …. အမြဲ မြင်နေ ခဲ့ရ ပါတယ်။ ကဗျာလေး တွေထဲက ချစ်ရသူဟာ ပန်းခြံစောင့် ကောင်လေး ပါလားလို့ သိလိုက် ရပေမယ့် ကောင်မလေး အတွက် ထူးပြီး အံ့သြစရာ တစ်ခု ဖြစ်မနေ ခဲ့ပါဘူး။ စိတ် … စိတ်ချင်း ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင် ခဲ့ကြ ပြီးသား ပဲကွယ်။ နာမည်တွေ … ဂုဏ်ဒြပ် တွေလည်း မလိုတော့ ပါဘူး။ ကောင်လေးဟာ သူ့ကို နှုတ်ဆက်ဖို့ လာခဲ့တာ ပါလား ဆိုတဲ့ အသိကို လက်ခံ လိုက်ရ ပြီးတဲ့နောက် ….. တစ်လောကလုံး မှိုင်းညို့ အုပ်ဆိုင်း သွားခဲ့ ပါတယ်။ ကောင်မလေး ဟာလည်း ကောင်လေးကို ကြေကြေ ကွဲကွဲ နှုတ်ဆက် နေခဲ့ ပါတယ်။ သူ့နှုတ်ဆက် ခြင်းကို ကောင်လေး သိမယ် ဆိုတာ ကောင်မလေး ယုံကြည် နေခဲ့ သလို … ကောင်လေးရဲ့ နှုတ်ဆက် စကားတွေ ကိုလည်း ကောင်မလေး အလိုလို သိနေ ခဲ့ရ ပါတယ်။ သွားတော့မယ် ကောင်လေးရယ် ….။
ရထား ပေါ်က သူမ ထိုင်မယ့် ထိုင်ခုံလေး ပေါ်မှာ …. ထုံးစံ အတိုင်း လက်ရေး စောင်းစောင်း ကဗျာလေး။ တစ်ခေါက် …. နှစ်ခေါက် …. သုံးခေါက် …. အို … ဒီကဗျာကို ကိုယ်မှတ်မိ မနေချင် ဘူးကွယ်။ ကိုယ့် နှလုံးသား ထဲဝင်ပြီး တဆစ်ဆစ် တူးဆွ နေတော့မယ့် ကဗျာ ပဲလေ။ အတင်း ငြင်းဆန် နေခဲ့ ပေမယ့်လည်း မရ နိုင်မှန်း ကောင်မလေး သိနေ ခဲ့ပါတယ်။ ကြေကွဲ … ဆွံ့အ နေတဲ့ မျက်ဝန်း အစုံနဲ့ ကောင်မလေးကို လှမ်းကြည့် မိတယ်။ အို …. သူလည်း ကိုယ့်ကို ကြည့်နေ ခဲ့တာ ပါလား။ မျက်ရည်စတွေ ကျလာ မိသလား မသိဘူး။ ကောင်မလေး စိတ်ထဲမှာ အရမ်းကို ထစ်ချုန်း ပူလျ နေခဲ့ ပါပြီ။ ချစ်တယ်လို့ တစ်ခွန်း တည်းပဲ လာပြော လှည့်ပါ ကောင်လေးရယ်။ အရာရာကို နောက်မှာ ပစ်ချ …. အဲဒီလို ရဲရင့်မှု မျိုးတောင် ထုတ်ပြ လိုက်ချင် ပါတယ်။ ရထား ထွက်မယ့် အချိန်လည်း တဖြည်းဖြည်း နီးကပ် လာနေ ပါပြီ။
ကောင်မလေးကို ငေးငေး မှုန်မှုန် ကြည့်နေရင်း နဲ့ပဲ ကောင်လေး ကိုယ်တိုင်လည်း ကြေကွဲ ရစ်သီ နေခဲ့ ပါတယ်။ သူ့ကဗျာ လေးကို ငုံ့ဖတ် နေရှာတဲ့ ကောင်မလေး မျက်နှာ …. ပြီးတော့ နှုတ်ဆက် စကား တွေကို ပို့လွှတ် နေတဲ့ သူမရဲ့ မျက်ဝန်း …. သူမရဲ့ ပူလောင် စီးကျ မျက်ရည် စတွေ …. အစ အဆုံးကို ကောင်လေးရဲ့ စိတ်ထဲမှာ မှတ်သား နေခဲ့ ပါတယ်။ အံ့သြစရာ ကောင်းလောက်အောင် ကောင်လေးသာ စကား တစ်ခွန်း ပြောလိုက်ရင် အရာရာကို ရင်ဆိုင် နိုင်တဲ့ ဖျိုးဖျတ်စူးရှ မျက်ဝန်း တွေကို ကောင်မလေး ဆီမှာ သွားတွေ့ လိုက်တယ်။ ဟား ….. ဒါအခွင့် အရေးပဲ …။ ငါတို့ ချစ်သူ နှစ်ဦး အတွက် ဘယ်တော့မှ မဝေးကြ တော့မယ့် အခွင့်အရေး မျိုးပဲလေ ….. ငါ …. ငါ … ။ တကယ့်ကို ခဏလေး ပါပဲ။ ကောင်လေး သူ့စိတ်ကို ထိန်းချုပ် ပစ်လိုက်တယ်။ ကောင်မလေးရယ် …. မင်းရဲ့ ရဲရင့်မှုကို ကိုယ် မိုက်ရူးမှု အသွင် ပြောင်းမပစ် ပါရစေ နဲ့ကွယ်။ မင်း နားလည် ပါစေ ကောင်မလေးရယ် …။ အချစ်ဟာ ကဗျာ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင် ပေမယ့် ကဗျာ ကတော့ ဘ၀ တစ်ပုဒ်မှ မဟုတ်ခဲ့ နိုင်တာ …..။ ကိုယ်တို့ …… မမိုက်မဲ ကြပါ စေနဲ့ တော့ကွယ်။
စိတ်ကို ထိန်းချုပ် ကွပ်ကဲ နေရင်း ကပဲ ကောင်လေး ရထား ရပ်ထားတဲ့ နေရာကို လှမ်းလာ မိတယ်။ အိုး … နှင်းတွေ ကလည်း ထူးထူး ခြားခြား ထူထပ် ဖျောက်ကြွေ နေကြ ပါရော လားကွယ်။ ဒါဟာ …. ဘာဖြစ်လို့ ဇာတ်ဝင်ခန်း တစ်ခု မဖြစ်ခဲ့ တာပါလိမ့် ….။ ရထား နားကို လျှောက်လှမ်း လာမိရင်း ကပဲ ကောင်လေးဟာ ကောင်မလေး မျက်နှာကို မေ့မေ့ မောမော မြတ်နိုးမှု အပြည့်နဲ့ ကြည့်နေခဲ့ ရှာတယ်။ ဒါပဲ …. ကိုယ့်ရဲ့ အတတ် နိုင်ဆုံး စွန့်စားမှု ဖြစ်ပါ လိမ့်မယ်ကွယ် …။ နောက် … ကောင်လေး ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု ချလိုက်တယ်။ အဲဒီ ဆုံးဖြတ်ချက် နဲ့အတူ မျက်ရည် တစ်စလည်း ခိုတွဲ ပါလာ ခဲ့ပါတယ်။ အတတ် နိုင်ဆုံး အားတင်းပြီး ကောင်မလေးကို တစ်ချက် ပြုံးပြ လိုက်တယ်။ ကောင်မလေးရယ် ……. နှင်းမှုန် အိပ်မက် လေးရယ် …… အဲဒီ အပြုံးဟာ …. လက်ဆောင် တစ်ခု ပါပဲ။ ဒါကိုပဲ …. ဒါကိုပဲ ….. နင် သယ်ဆောင် သွားတော့ကွယ် …… သွားတော့ …… ဝေးကြ ပါစေ တော့ကွယ် ….။ နှင်းတွေ ကလည်း ဝေလိုက်တာ …… ကြွေလိုက်တာ ……။ ကောင်လေး မျက်နှာ လွှဲလိုက် ပါတော့တယ်။
နှင်းပြောက် နှင်းစက်တွေ အိုမင်း ရင့်ရော် စွာပဲ ကောင်လေး မျက်နှာပေါ် လွင့်ဝေ ကျကြွေ နေခဲ့ကြ ….. ရထား ထွက်သွား တဲ့အထိ လက်ကျန် အင်အား နဲ့ပဲ ကောင်လေး မျက်နှာ လွှဲထား ပစ်ခဲ့ရ ပါတယ်။
အပြင်မှာ မိုးတွေ အုံ့မှိုင်းညိုလွှမ်းနေသလား။
ဘာကိုမှလည်း သဲသဲကွဲကွဲ မမြင်နိုင်တော့ဘူးကွယ်….
အဲ ဒီ လို နဲ့ …
အဲ ဒီ လို နဲ့ ……. နှင်းဖြူ မြူခိုးတွေ ဖွဲဖွဲဝေေ၀ ကြွေတဲ့ ကာလ ……… လွမ်းမောစရာ ကောင်းလောက်အောင် နှင်းပြောက် ၀ိုးဝါးတွေ ပြိုင်းရိုင်း ဖွာကျဲ နေတဲ့ ခုံတန်း လေးတွေ ပေါ်မှာ ………. အဲဒီ …. အထီးကျန် ခုံတန်း လေးတွေ ပေါ်မှာပဲ ……. လက်ရေး စောင်းစောင်းနဲ့ “နှင်းမှုန်အိပ်မက်” ကဗျာတို လေးတွေ ……… လွင့်ကျ နေခဲ့ ပါတယ်။
မင်းနေရာမှာ ငါသာဆိုရင် ၀တ္ထုဆရာကို ကျိန်ဆဲမိမှာပဲ
စောစောစီးစီး ချစ်တယ်မပြောခိုင်းလို့ 